Syria: Nahatonga Izao Tontolo Izao Hampiaka-peo Ny Vonomoka Tao Houla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2012 13:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Deutsch, Français, Dansk, Български, Ελληνικά, عربي, 한국어, English
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana ao Syria 2011/12 ity lahatsoratra ity
Io andro io ihany, lahatsary iray [SARY MAHERY SETRA] no nivoaka tao amin'ny YouTube mampiseho lehilahy toa mihazakazaka mandositra tifitra vary raraka. Ireo tatitra dia manambara fa fiara mifono vy, basy marovava, fitaovana fanipazana grenady, ary fitaovam-piadiana mavesatra no nampiasaina tamin'ilay fanafihana. Ilay mpaka sary dia nandrakitra an-tsary ny fidirana aminà tranobe iray izay nahitàna vatana mangatsiaka nivalampatra amin'ny tany, no sady nihiaka ny anaran'ny tanànan'i Houla. Raha ny tara-pahazavana tsinjo dia mahatonga hisaina hoe fiandohan'ilay tifitra vary raraka naharitra ora fito be izao io.
Lehilahy mitam-piadiana mitafy fanamiana miaramila avy eo no nandeha niditra tamin'ireo trano sady nanomboka nifititra olona, anisan'izany ny ankizy marobe.
Lahatsary iray hafa [TADREMO: SARY MAHERY SETRA] no mampiseho efitrano iray heverina ho nametrahana ireo razana – ankizy no maro – norakofana lamba, ary mandritra izany no mihiakiaka ny lehilahy iray manameloka ny fahanginanan'ny tontolo Arabo.
@Thanku4theAnger: Niantso ny mpitarika ny mpanaramaso avy amin'ny Firenena Mikambana i Hadi Abdallah mikasika ny vonomoka tao Houla. Ny valiny azony : “Tsy avelan'ny fitondrana hivoaka alina izahay”
@Thanku4theAnger: Hadi Abdallah : Maratra maherin'ny 300 mitolona amin'ny fahafatesana no eto anoloanay & tsy afaka manome na dia izay fitsaboana vonjimaika akory aza izahay
@acarvin: Mihoson-drà ireo sary nozaraina tamin'ny alalan'ny tenifototra #HoulaMassacre‬, mahery setra ary mahavaky fo. Zaza mahafatifaty marobe, maty. ‪#syria
@NMSyria: Nanameloka tsy nisy nitsipaka ny fampiasana fitaovam-piadiana mavesatra tamin'ilay vonomoka #HoulaMassacre nahafatesana olona 108 ny filan-kevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana. Mba marina hoe ?
@Hamadx: #AlHoulahMassacre‬ Tena tsy te-hiteraka mihitsy intsony aho. Tsy azo antoka ity tontolo ity, tsy misy ny maha-olona.
Zeinobia, Ejiptiana bilaogera, dia naneho hevitra tao amin'ny bilaoginy:
Fomba ahoana moa izany izao no hanehoako hevitra mikasika ny fandrosoan'i Siria amin'izao? Tsy mino tsotra izao ny fitondrana Siriana sy ireo vondrona mpanohitra Siriana any an-tsesitany aho : izy roa ireo dia samy manana tantaranà heloka bevava, vonoolna sy lainga ary famoromporonana. […] Mazava loatra, ny governamanta miarakana amin'ny antontan'isan'ady feno rà mandriaka sy ny heloka an'adiny (teo ambany fitondran'i Hafidh ary amin'izao eo ambany fitantanan'i Bashshar), afaka tondroina mora foana ho tomponandraikitra tamin'io vonomoka io. Sady tsy manana fahatsiarovantena ara-moraly na soatoavina arahana mba mety ho nisorohana ny tsy hanaovany heloka bevava tahaka izany. Nefa araka izay nambaran'ny namana iray (Amer) tamiko mikasika azy ity : “Izay fomba filaza rehetra naroso ahy dia tsy misy dikany daholo, ny hamaroan'ny lainga dia mahatonga koa ny tsy fahalalàna intsony izay marina: fandarohana baomba? vonomoka? tafika? vohitra mifanafika? tsy afaka ny hiara-hitranga aminà fotoana iray mitovy ireo rehetra ireo.”
@Maysaloon: Mazava ny toerana raisin'i Angry Arab momba an'i Syria‬ : aoka izany ny mpanohitra sy ny mpitondra, nefa ny mpanohitra indrindra indrindra, sy ny mpitondra, fa ny mpanohitra indrindra indrindra.
Ruwayda Mustafah nitondra fanamarihana momba ny toerana noraisin'i Rosia:
@RuwaydaMustafah: Vao voaray mihitsy ity. ‘Miteny i Rosia fa samy tafiditra tamin'ny vonomoka tao Houla ny andaniny sy ny ankilany’. Inona no antony hamonoan'ny mpanao hetsi-panoherana ny zanany naterany?
Ny sasany aza dia nampitaha mihitsy ny governemanta Siriana amin'i Israely (izay tomponandraikitra tamin'ny vonomoka iray tamin'ny taona 1948 tao amin'ny tanàna Libaney atao hoe Houla, izay toa fifanandrifian-javatra angamba):
@SultanAlQassemi: Vonomoka atao amin'ny tsy manan-tsiny – Bashar Al Assad no Ariel Sharon vaovao.
@HamaEcho: Fitokonana faobe any amin'ireo tsena lehibe ao Damaskaosy androany ho fanamelohana ny vonomoka nataon'ny fitondrana.
@ZainSyr: Nikatona daholo ireo toeram-pivarotana tao amin'ny Tsena tranainy ao Medhat basha & Hareqa! Sambany ry zareo ireo no nandray anjara taminà fitokonana! ‪Damaskaosy! Akaiky ny farany isika